Ifulethi elithokomele elinamakamelo amabili-60 mű elinethala laseNingizimu - I-Airbnb
Ifulethi elithokomele elinamakamelo amabili-60 mű elinethala laseNingizimu
Alfter, Nordrhein-Westfalen, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jürgen
U-Jürgen Ungumbungazi ovelele
Emaphandleni kodwa eduze nedolobha, cishe 60 m2, indawo yokungena yangasese, eyengeziwe cishe 15 m2 ithala elibheke eningizimu engadini enkulu enezihlahla ezindala.
Ifulethi linamakamelo amabili amakhulu, ikhishi elihlanganisiwe, iphasishi kanye negumbi lokugezela.
Ukusetshenziswa kwe-sauna yefulethi ngaphakathi kohlaka lwemithetho ye-corona esemthethweni kungenzeka ngemali encane.
Ingadi ingasetshenziswa kuphela ngokuhlelwa kwangaphambili.
Ifulethi elibanzi liyalungiswa futhi linefenisha ekhanyayo. Indlu yokugezela ifakwe ishawa, usinki kanye nendlu yangasese.
Ehlobo, amakamelo aphakathi kwezindawo ezinomoya opholile wendlu. Ukulungiswa kwamanzi ashisayo kanye nokushisisa phansi ezinyangeni ezipholile kunikezwa ngepompo yokushisa yomoya/yamanzi.
Iphansi libekwe ngokuphelele ngamathayili namatshe emvelo. Ngaphandle kwekamelo lokulala elinombhede we-140, kukhona umbhede we-sofa onezihlalo ezingu-3 (okungaba ngu-150 cm ububanzi) endaweni yokuhlala / yokudlela, engasetshenziswa njengombhede ogcwele wezivakashi ezimbili ezengeziwe. Umbhede wokuhamba wezingane uyatholakala.
Lapha uhlala, ngenxa yokuxhumana okuhle kwezokuthutha (ibhasi, isitimela, imoto), enkabeni yedolobha laseBonn.
Uhambo lwemizuzu eyishumi likuyisa endaweni yokuzilibazisa yase-Kottenforst e-Bonn, lapho ongakwazi khona ukuhamba nenja yakho, uhambe ngezinyawo, ugijime, u-skate ophakathi komugqa noma ugibele ibhayisikili.
Amabhange anemishini ye-EC, odokotela, izitolo nezindawo zokudlela aqhele ngamamitha angu-900 emgwaqeni omkhulu enkabeni yedolobha, isibhedlela siqhele ngamakhilomitha angu-2.3 kanti indawo yokubhukuda iqhele ngamakhilomitha amathathu. Ichibi elikhulu lokuzijabulisa, i-"Monte Mare" elinendawo ye-sauna yekilasi lokuqala ongaphumuza kuyo litholakala e-Rheinbach, amakhilomitha angu-8 ukusuka.
Ngaphezu kwalokho, akukude nepaki yokuzijabulisa yase-Phantasialand, i-Cologne Cathedral kanye ne-Cologne Trade Fair, futhi yonke into ingafinyelelwa kalula ngezithuthi zomphakathi.
I-Rhine, i-Ahr valley kanye nesifunda sase-Eifel zilungele olunye uhambo.
Amabhayisikili angawakho angapakwa ngokuphepha.
Freizeitgestaltung: Motorrad fahren, Ski laufen, Wandern, Reisen
Gast: Selbständig, interessiert an Land & Menschen.
Gastgeber: Kontakt möglich, aber kein Muss. Hilfsbereit .
Okhiye banikezwa mathupha phakathi nezikhathi zokungena. Siyatholakala kubavakashi bethu emini. Uma unemibuzo noma izinkinga, sisemandleni akho.
UJürgen Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Alfter namaphethelo